China Phawu loMlilo phuma Sign Australia Ukwakha kunye Factory | Saselux
Inaliti-ebunjiweyo ye-thermoplastic ABS yezindlu
Ukulinganisa ilangatye ye-UL-94V-0, enganyangekiyo ngumlilo
Igalelo Voltage: 220-240V
Ukusetyenziswa kwamandla: 4W ubuninzi bokugcinwa
Ukusetyenziswa kwamandla: 2W max ngokungagcinwanga
Oukuphuma: 2W max.
3.2V 1300mAh LiFePO4 Ibhetri
Ukutshaja ixesha: iiyure ezingama-24
Ixesha lokukhupha: iiyure ezi-2
Ixesha lokuguqula: <0.2second
IP Udidi: IP20
Ubushushu obusebenzayo: 0 ° C ~ 40 ° C
VUmgama we-iew: 24m
Lobukhulu: 364 * 228.6 * 100.5mm
I-IEC 60598-1: 2014
① [Iqinisekisiwe i-UL] I-SASELUX ekhokele ukuqhuba kweeyunithi zezibane eziphuma kumadoda zavavanywa kwiimfuno zeSAA kunye nezatifikethi zeEC. Ukudodobalisa umlilo, inaliti ebunjiweyo yezindlu ze-thermoplastic, iMigangatho yeZibane eziNgxamisekileyo, Amandla kunye nezixhobo zeYunithi.
② [Ufakelo olulula] Icala elinye, Ukunyuswa kwendalo yonke: Ukunyuswa kodonga, Ukuxhonywa kophahla kunye nokufaka udonga ngokufaka i-Canopy evela eSASELUX ekhokele izibane zokuphuma ngokungxamisekileyo. Ilungele indawo engamanzi ngaphakathi, kodwa ayimanzi.
③ [Ukuhlala ixesha elide] Ukukhanya okukhanyayo okuluhlaza okukhanyayo kuxhase umqondiso wokuphuma kwiiyure ezingama-50 000 zobomi kwaye ubonakala ukusuka kwi-100 yeenyawo kude.
④ [iStrong Power Supply] 3.2V 1300mAh LiFePO4 ibhetri yogcino ibonelela ngaphezulu kwe-120mins ngexesha lokucima kombane. Ibhetri etshintshiweyo esetyenzisiweyo kukhanyiso lwophawu olungxamisekileyo lokuphuma inokutshaja kwakhona i-AC 220 / 240V ngaphezulu kwamaxesha angama-300.
⑤ [Umgangatho oQinisekisiweyo kunye neNkonzo] Zonke i-SASELUX zikhokele izibane zokuphuma ngokungxamisekileyo ezigutyungelwe ngumgaqo-nkqubo we-After-sale & WARRANTY oxhasa i-5years yeebhodi zombane kunye nezindlu ngenkonzo yobungcali emva kokuthengisa.
Egqithileyo Umgangatho olungileyo we-10kva weSigaba esinye se-Cile engu-Diesel Generator
Okulandelayo: Uluhlu lwe-LED Ephumayo kuNgxamiseko
Phuma Phawu Ngena
UkuKhanya okungxamisekileyo ngokuPhuma
Led Phuma Sign
Iimpawu zokuphuma eziKhokelwayo ngeBattery Backup
Ukubaleka komntu kuphuma uphawu
Ukutshajiswa kwePhawu loPhumo oluNgxamisekileyo lwe-LED
Ceiling Okanye oxhonyiweyo Ukunyusa Fire Phuma Sign Popu ...
Australia Standard LED Emergency Uphawu Sign